I-Homopiperazine powder (505-66-8) hplc =98% | Yenza ama-Reagents we-R & D
/ Imikhiqizo / Ama-Reagents e-R & D / Homopiperazine powder
SKU: 505-66-8. Isigaba: Ama-Reagents e-R & D
I-AASraw ihlanganisa ikhono lokuqamba nokukhiqiza kusuka kugramu kuya ku-mass of Homopiperazine powder (505-66-8), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
I-Homopiperazine powder isetshenziselwa ukulungiselela i-1,4-bis- (2-thiazolyl) -1,4-diazacycloheptane ngokuphendula nge-2-bromo-thiazole. Isebenza njenge-intermagate for repaglinide ne-fasudil hydrochloride. Ibuye isetshenziswe ekulungiseleleni izitha zokuphikisana ze-H3 ezinamandla, ezisetshenziselwa ukwelashwa kwezimo ze-neurodeergenerative. Ngaphezu kwalokho, lisetshenziswe ku-vesicant, cosmetic, emulsifier kanye nokusebenza okunamandla. Isebenza njenge-inhibitor ye-corrosion yensimbi. Emithini yemithi, iqashwe njenge-antipyretic futhi iyanciphisa ushukela wegazi, ukubekezela, ukuzola, ukulwa nesifo sokulwa nesifo sofuba nokuphikisana no-nervous.
I-Homopiperazine powder video
I-Homopiperazine powder Izinhlamvu eziyisisekelo
Igama: I-Homopiperazine powder
Formula Yamamolekhula: C5H12N2
Isisindo somzimba: 102.177
I-Melt Point: I-38-40 ° C (ivuliwe.)
Isitoreji Sokugcina: Isiqandisini, ngaphansi kwe-Inert Atmosphere
Umbala: I-White kuya ekhanyayo i-Crystalline powder
I-Homopiperazine powder njengokwelashwa kwezimo ze-neurodeergenerative
I-hexahydro-1,4-diazepine; I-1,4-Diazepane; i-perhydro-i-1,4-diazepine; I-1,4-Diazacycloheptane; 2,3,4,5,6,7-Hexahydro-1H-1,4-diazepine; I-1,4-diazepanediium; i-homopiperazate
Ukusetshenziswa kwe-Homopiperazine powder
Umthamo walo muthi uzohluka uma iziguli ezihlukene. Landela imiyalo kadokotela wakho noma izikhombisi zelabula. Ulwazi olulandelayo luhlanganisa kuphela ukulinganisa okujwayelekile kwalolu mithi. Uma ngabe umthamo wakho uhlukile, ungashintshi ngaphandle kokuthi udokotela wakho akutshele ukuthi wenze kanjalo.
Inani lemithi oyithathayo lixhomeke emandleni omuthi. Futhi, inani lamanani ozithatha usuku ngalunye, isikhathi esivunyelwe phakathi kwamanani, nobude besikhathi osithatha umuthi kuxhomeke enkingeni yezokwelapha oyisebenzisayo.
(I-1) I-granules ifomu le-dosage solution yesilinganiso:
• Abantu abadala nezintsha-ama-2 amagremu kathathu ngosuku ngosuku olulodwa. Ukwelashwa kungadinga ukuphindaphindiwe emavikini amabili.
• Izingane-I-Dose isekelwe eminyakeni yobudala kanye / noma isisindo somzimba. Ukwelashwa kungadinga ukuphindaphindiwe emavikini amabili.
• Kuze kube neminyaka engu-2: I-dose kumele iqinisekiswe udokotela wakho.
• 2 iminyaka engu-8: ama-2 amagremu kanye ngosuku ngosuku olulodwa.
• 8 kuya eminyakeni engu-14: ama-2 amagremu kabili ngosuku ngosuku olulodwa.
(I-2) Ifomu lesimo sokumiswa ngomlomo:
• Abantu abadala kanye nentsha-ama-1.8 amagremu njalo emahoreni amane ngokulinganisa kwamanani amathathu ngosuku olulodwa. Ukwelashwa kungadinga ukuphindaphindiwe emavikini amabili.
• Izingane-I-Dose isekelwe eminyakeni yobudala. Ukwelashwa kungadinga ukuphindaphindiwe emavikini amabili.
• Kuze kube neminyaka eyi-2: i-600 milligrams (mg) njalo emahoreni amane ukuze kube nesilinganiso samanani amathathu ngosuku olulodwa.
• 2 iminyaka eyi-8: ama-1.2 amagremu njalo emahoreni ayisithupha ngenani lamanani amabili ngosuku olulodwa.
• 8 iminyaka eyi-14: ama-1.2 amagremu njalo emahoreni amane ngokulinganisa kwamanani amathathu ngosuku olulodwa.
(3) Ifomu lesimo sethebulethi:
• Abantu abadala kanye nentsha-i-3.5 amagremu (i-piperazine hexahydrate) ngosuku ngosuku lwezinsuku ezimbili ngokulandelana. Ukwelashwa kungase kudingeke kuphindwe ngesonto elilodwa.
• Izingane-I-Dose isekelwe kwisisindo somzimba futhi kufanele ziqashwe udokotela wakho. Kodwa-ke, umthamo ojwayelekile u-75 mg (i-piperazine hexahydrate) kilogram (34 mg ngekhilimu ngayinye) yesisindo somzimba ngosuku ngezinsuku ezimbili ngokulandelana. Ukwelashwa kungase kudingeke kuphindwe ngesonto elilodwa.
• Abantu abadala kanye nezingane-I-Dose isekelwe kwisisindo somzimba futhi kumele inqunywe udokotela wakho. Kodwa-ke, umthamo ovamile u-65 mg (piperazine hexahydrate) kilogram (29.5 mg ngalinye) isisindo somzimba ngosuku ngosuku lwezinsuku eziyisikhombisa ngokulandelana. Ukwelashwa kungase kudingeke kuphindwe ngesonto elilodwa.
Isexwayiso ku-Homopiperazine powder
Ungadli imbongi noma i-kitten ngaphansi kwamasonto ayisithupha ubudala. Ungalokothi ube nembungu isidakamizwa esigulayo, inja, ikati, noma inja. Xhumana nodokotela wezilwane ekuxilongweni, ukwelashwa nokulawulwa kwe-parasitism. Akunconywa izinja ngaphansi kwe-5lbs. noma amakati ngaphansi kwe-2lbs. yesisindo somzimba. Akunconyelwe abesifazane abakhulelwe noma abahlengikazi. Izilwane ezifuywayo ezingaphezu kweminyaka engu-1 ubudala kufanele zibe nokuhlolwa kwegazi okwenziwe yamuva kwegazi ngaphambi kokuguqulwa.
I-Homopiperazine powder ingasetshenziswa njengama-intermediate ase-organic and pharmaceutical synthesis, isibonelo, isetshenziselwa ukuhlanganiswa kwe-fasudil hydrochloride.
I-Homopiperazine powder iyasebenza njenge-inhibitor ye-corrosion yensimbi. Kuye kwasetshenziselwa ukulungiswa kwezimpikiswano ezinamandla ze-H3 zokuthola ukusetshenziswa njengezokwelapha ngezimo ezingezansi ezifana nesifo se-Alzheimer.
I-Homopiperazine Raw Powder
I-Homopiperazine powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Homopiperazine powder kusuka ku-AASraw
Ukupheka Kwamapulasitiki Ama-Homopiperazine Raw:
Umbiko Wezobuchwepheshe Osezingeni eliphezulu Ngomuntu On Homopiperazine
I-Monomethyl auristatin E (MMAE) powder
I-Boldenone i-Acetate powder